Layma's World: ၀မ်းသာရမှာလား…၀မ်းနည်းရမှာလား???
Posted by Layma at 7:27 PM
I'm happy to hear that u r sad !!!
မလေးမ ရျာလို့ တွေ့ သွားလို့ ဖတ်သွားတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကို ကိုယ်တတ်ထား သင့်ပါတယ်။ :)